आइजिपी ज्ञवालीको अग्नि परीक्षा सुरु ! - प्रशासन प्रशासन
आइजिपी ज्ञवालीको अग्नि परीक्षा सुरु !
प्रकाशित मिति : 14 February, 2020 7:00 am
काठमाडौँ । निर्विवाद नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीको पहिलो अग्नि परीक्षा एआईजी बढुवाबाट सुरु हुँदै छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एकै दिन २२ जना उच्चपदस्थसहित एआईजीत्रय पुष्कर कार्की, ठुले राई र धिरु बस्न्यातले अनिवार्य अवकाश लिएसँगै रिक्त तीन एआईजी पदका लागि सात जना डिआइजी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
जसमा महानिरीक्षक ज्ञवालीकै ब्याजि तारिणी लम्साल र सूर्य उपाध्याय रहेका छन् भने त्यसपछिको ब्याचबाट शैलेश थापा क्षेत्री, हरि पाल, नीरज शाही र प्रद्युम्न कार्की रहेका छन् । त्यसपछि बढुवा भएका विश्वराज पोखरेल समेत यसैपटक एआईजी हुने दौडमा छन् । तीन पदका लागि पहिलो नम्बरमा तारिणी लम्साल र दोस्रोमा सूर्य उपाध्याय निर्विवाद जस्तै भए पनि तेस्रोमा कसलाई बनाउने भन्ने नै सबैभन्दा बढी सकसपूर्ण हुनेछ । अहिले पहिलो नम्बरमा एआइजी सिफारिस हुने व्यक्ति नै पाँच महिना पछिको आइजिपीको दाबेदार हुनेछ ।
जसरी सरकारले वरिष्ठलाई लत्याउँदै कनिष्ठलाई आइजिपी बनाएर संगठनमा चरम असन्तुष्टि जन्माउने र अदालतसम्मै पुग्ने यसअघिको परिपाटीमा ब्रेक लगाउँदै पहिलो दाबेदार ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेर थिति बसाल्न खोजेको छ, त्यसैगरी एआईजी नियुक्तिमा पनि सिनियारिटिकै आधारमा नियुक्ति दिलाउन सके मात्रै आइजिपी ज्ञवालीको नियुक्ति सार्थक हुनेछ ।
सर्वोच्च पदमा पुग्ने जो कोहीको पनि चाहना हुन्छ तर राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा सिनियरलाई जुनियरले उछिन्ने अवस्था आयो भने त्यो सिङ्गो सङ्गठनका लागि घातक साबित हुन्छ । त्यसमाथि पनि फौजी जस्तो संवेदनशील सङ्गठनमा यस्तो हुनु कदापि हितकर हुँदैन ।
ठाकुर ज्ञवाली आइजिपीमा नियुक्त
ठाकुर ज्ञवाली आइजिपी हुने पक्का
Tags : आइजिपी एआईजी प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा
28 February, 2020 8:39 pm
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वर्तमान अवस्थामा नेपाली